100% အခမဲ့ Linux ဖြန့်ဝေ | Linux မှ
100% အခမဲ့ Linux ကိုဖြန့်ဝေ
La FSF ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းတင်းကျပ်သည် 100% ကုဒ်အခမဲ့ o ပုဂ္ဂလိကဆော့ဝဲ.
သူတို့ သူတို့မှာစာရင်းရှိတယ်။ သူတို့ကဤဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်ဖို့စဉ်းစားသောဖြန့်ဝေအတူ။
ဤရွေ့ကားဖြန့်ဝေဖြစ်ကြသည် GNU / Linux များ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်း၎င်းတို့တွင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုသာကမ်းလှမ်းရန်နှင့်၎င်းတို့တွင်ကတိပြုသည့်ခိုင်မာသောမူဝါဒရှိသည်။ ဤဖြန့်ဝေမှုများသည်အခမဲ့မဟုတ်သော application များ၊ ပရိုဂရမ်မာပလက်ဖောင်းများ၊ driver များနှင့် firmware များကိုငြင်းပယ်သည်။ သူတို့ကမှားယွင်းတစ်ခုခုပါဝင်သည်ဆိုပါက, သူတို့ကဖျက်ပစ်။ ဤဖြန့်ဝေမှုများတွင်အခမဲ့မဟုတ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်တွေ့ရှိပါက၊ သင်အစီရင်ခံ။ GNU ခေါင်ကိုရရှိနိုင်သည် လုပ်ငန်းစဉ်၌။ အခမဲ့ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ အခမဲ့ဖြန့်ဝေဖို့လမ်းညွှန်.
BLAG LinuxFedora ကိုအခြေခံပြီး GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
Dragora ရိုးရှင်းသောအယူအဆကို အခြေခံ၍ လွတ်လပ်သော GNU / Linux ဖြန့်ဝေခြင်း။
ဒebနအသံနဲ့ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးကိုအထူးအလေးပေးတဲ့ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
gNewSense- GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုသည် FSF မှကမကထပြုထားသော Debian နှင့် Ubuntu အပေါ်အခြေခံသည်။
Musix GNU / Linuxအသံထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးအလေးပေးတဲ့ Knoppix ကိုအခြေခံပြီးဖြန့်ဖြူးခြင်း။
Parabola GNU / Linuxလွယ်ကူသောစနစ်နှင့်အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ဦး စားပေး Arch-based ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
အရက်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်အသုံးပြုသူများနှင့်ပညာရေးစင်တာများအတွက် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
UTUTO-e- Gentoo ကိုအခြေခံပြီး GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ ၎င်းသည် GNU Project မှအသိအမှတ်ပြုထားသောပထမဆုံးအခမဲ့ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။
ချစ်သူ: GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကို KDE desktop ပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည်။
ငါကစပ်စုရှာပါ debian ဒီစာရင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး သင်ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားနိုင်သလဲ gNewSense အပေါ်အခြေခံသည် debian y Ubuntu ကို။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုစပ်စု Debian ညှစ် ကနှင့်အတူကြွလာ 100% အခမဲ့ kernel ကို သာထံမှ packages များနှင့်အတူ အဓိက။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုပြောဆိုခြင်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီဟာသုံးစွဲသူတစ်ယောက်ချင်းစီပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်နှင့်လိုအပ်ချက်၊ သူတို့ကိုငါထားခဲ့ပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘာကိုတန်ဖိုးထားသင့်သလဲ
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၀% open source OS ရှိလိမ့်မည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပြောနေသကဲ့သို့, သင်၏ရွေးချယ်မှုမှာ။ ကံကောင်းတာကငါ debian ကိုယ့် source.list ကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ပံ့ပိုး, Non- အခမဲ့.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » 100% အခမဲ့ Linux ကိုဖြန့်ဝေ
ငါ Debian ကိုမင်းကိုပြောတော့မယ်၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ distros များသည်အစွန်းရောက်သမားတွေအတွက်ဖြစ်သည် Debian သည်ဆာဗာများအတွက်အလုပ်လုပ်သော်လည်းအခြားသူများကလုပ်သည်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအခမဲ့လွတ်လပ်စွာသိုလှောင်ထားသောနေရာများရှိသည်။ ၎င်းသည်အစွန်းရောက်သူများအတွက်ဟုတ်မဟုတ်မသိရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့်ခြားနားချက်ကိုသိပြီးပထမနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်ငါထင်သည်။
ဒါပေမယ့် Debian ကရေတွင်းတစ်တွင်းကိုခုန်ဖို့အကြံပေးမယ်ဆိုရင်မင်းလုပ်မှာလား။ ဒါ့အပြင်ဒီ repositories တွေကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြံပြုထားတာကိုကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။ Debian6ကြေငြာချက်ထဲမှာကျွန်တော်မှတ်မိတာတစ်ခုကမင်းမှာပြissuesနာတစ်ခုခုရှိရင်သူတို့သုံးလို့ရမယ်။ ဒါပေမယ့်လာစမ်းပါ၊ ငါဒါကိုအကြံပေးချက်တစ်ခုအနေနဲ့မမြင်ဘူး
အဘယ်သူမျှမ, ငါပထမ ဦး ဆုံးအသက်ကယ်အင်္ကျီကို, တစ် ဦး အောက်စီဂျင်အကြံပေးအဖွဲ့နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယဝတ်ဆင် put
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ဖြစ်သည်၊ သင်တစ်ဝက်သေပြီဖြစ်သောအခါကျွန်ုပ်ခံစားမိပါကရှင်ပြန်ထမြောက်ပါမည်၊
ဟားဟား .. ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်သေဖို့သေပြီ။ ပြီးတော့မင်းက Arch ကိုသုံးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့မင်းကိုကယ်ချင်တယ်။ မင်းဒါကိုစတင် configure လုပ်တာဟာငါသေတာပဲ။
ဟားဟား!!!!! ဟားဟား !!!!! မှတ်ချက် JAJAJAJA !!!! အရမ်းရယ်ရတယ်။
ကောင်းပြီ၊ Arch Team နှင့် Debian Unstable သို့မဟုတ် Ubuntu နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမဟုတ်သမျှကာလပတ်လုံးပြproblemsနာများစွာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ အနည်းဆုံးကြီးမားသောမတည်ငြိမ်မှုပြproblemsနာများမှန်ကောင်းမှန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဟားဟား !!!!
ငါဆန့်ကျင်ဖက်ကိုခုန်ခဲ့ရတယ်။ ဘယ်သူမှသင့်ကိုဒီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာမထားခဲ့ဘူး၊ Debian Unstable နဲ့ Ubuntu တို့ကငါ့ကို Arch လိုထက်ငါ့ကိုပိုမြန်အောင်ကယ်တင်လိမ့်မယ်။
Arch VS Debian ဆွေးနွေးမှုကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်မကြိုးစားပါ။ တကယ်တော့ ... Arch မှာကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့နေရသောပြ,နာများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တွေ့ရမဲ့ပြsayingနာများအကြောင်းရေးသားရန် post ကိုတင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
install လုပ်ရန်ဤမျှကြာမြင့်စွာမကြာပါကသင်အလိုရှိပါက Hasefroch ဖြင့်ကျွန်ုပ်အားကယ်တင်ပါမည်။
ဆောင်းပါးတခုခုမှာ Debian Vs Arch ဆွေးနွေးချက်ကိုဘာကြောင့်မလုပ်သလဲ။ အဲဒီမှာမင်းကိုသတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်
Na, ငါသူ့ကိုသတ်ချင်တဲ့အခါငါ Monitor ကိုသူ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်၊
အရမ်းနည်းတာကမင်းကိုနည်းနည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ငါမဖန်တီးခဲ့ရင် Linux ကိုသုံးရအောင်
ဒီ purist အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ distros များမှာဘာအမှားမှမမြင်မိပါဘူး၊ ငါ nvidia ဂရပ်ဖစ်ကို ၀ ယ်လိုက်တော့ redundancy နဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်များရရှိရန်စီးပွားဖြစ် software ကိုအသုံးပြုသည်။
Parabola သည် KISS ဟုတ်မဟုတ်မည်သူမဆိုသိနိုင်ပါသလား။
သန့်ရှင်းသော distro ဖြစ်သော်လည်း Trisquel သည်ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ Fedora, Ubuntu, Suse နှင့် Linux Mint 11 (အားလုံး Gnome နှင့်အတူ) ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသည့် live distros များတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သောအခါ။ ဒါဟာအစအခြို့သောကျက်သရေရှိပြီးကြီးလှ၏။
MMM ။ ငါစပ်စုတယ်😀
Edit ကို: ငါယားယံခဲ့သည်🙁
၎င်းကို Debian-based ဖြန့်ချိမှုအဖြစ်အစပြုခဲ့သည်၊ သို့သော် ၂၀၀၈ ခုနှစ်နွေရာသီတွင်မူဗားရှင်း ၂.၀ ထွက်ရှိမှုနှင့်အတူ source repositories ကို Ubuntu သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Ubuntu စကြ ၀ universeာတွင်ရှိသော်လည်းစီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်အားလုံးဖယ်ရှားထားသည်။
ငါ Trisquel ကိုသုံးပြီးအဲဒါperfectlyုံအလုပ်လုပ်ပါတယ်
ငါထင်တာကတော့ debian ကထည့်သွင်းမထားဘူးလို့ထင်တယ်။ debian က contrib နဲ့ free repositories ကသူရဲ့တရားဝင် repositories မဟုတ်ပေမယ့်တချို့ကိစ္စတွေမှာ installer ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကို activate လုပ်ဖို့ရွေးတယ်။
Caledonia 0.9.8 Beta 1.0 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
၀ န်ထမ်းသစ်များငှားရမ်းရန် Ubuntu Hardware Certification Team